Tag: zvekutengesa zvemukati » Martech Zone
Tag: zvekutengesa zvemukati
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Sezvo bhizinesi rako parinoburitsa zvikwata zvekutengesa, iwe uchaona kuti kutsvaga kwezvakanaka zvemukati kunova chinhu chehusiku chinodiwa. Makambani ekuvandudza mabhizinesi anotsvaga mapepa machena, zvidzidzo zvemakesi, zvinyorwa zvemapakeji, zviongororwa zvebasa uye basa ... uye vanozvida zvakagadziriswa neindasitiri, kukura kwevatengi, uye saizi yemutengi. Chii chinonzi Kugonesa Kugonesa? Kugonesa Kugonesa ndiyo nzira yehurongwa yekushongedza masangano ekutengesa nematurusi akakodzera, zvemukati, neruzivo rwekutengesa zvinobudirira. Inopa simba Kutengesa reps kune
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Aya mavhiki mashoma apfuura, tanga tichiongorora zvese zvevatengi vedu zvemukati kuti tione izvo zvirikutyaira kuziva, kuita, uye shanduko. Yese kambani inotarisira kuwana inotungamira kana kukura bhizinesi ravo pamhepo inofanirwa kuve nezviri mukati. Nekuvimba uye chiremera kuve makiyi maviri kune chero sarudzo yekutenga uye zvemukati zvinotyaira izvo zvisarudzo online. Izvo zvakati, zvinongoda kutarisa nekukurumidza kune ako analytics usati waona kuti iyo
Chitatu, Nyamavhuvhu 17, 2016 Muvhuro, Nyamavhuvhu 22, 2016 John-Henry Scherck
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Kutengesa, seindasitiri, kuri kukurumidza kuchinja. Vatengesi zvikwata vagara vachikwanisa kuita kuwedzera kwekuwedzera kwemaitiro mukuita kwavo, asi mumakore mashoma apfuura, kutengesa kwapinda munguva nyowani inowedzerwa nehunyanzvi, kuongororwa uye neshanduko inoshamisa mukuita kwevatengi. Vatengesi vekutengesa vaisa tarisiro nyowani pakushandisa tekinoroji kuyera kutengesa rep chiitiko uye kugadzirisa mashandiro kuburikidza nehuwandu hwekuongorora uye kuyedza nematekisheni uye zano. Kana iwe uchienzanisa a
Chipiri, Zvita 1, 2015 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Pamwe izvi zvinofanirwa kunge infographic ingadai yakave imwe hofori kurudziro… tora vaverengi kuti vashandure! Zvakakomba, isu takatombo nyonganiswa kuti mangani makambani ari kunyora zvemukati zvemukati, kwete kuongorora avo vatengi base, uye kwete kuvandudza kwenguva refu nzira dzekutyaira vaverengi kuva vatengi. Kuenda kwangu kunotsvagisa nezve izvi kunobva kuna Jay Baer uyo akazviona izvo. Wedzera izvi nenyaya yekuti. Idzo mbiri mbiri dzinonongedzera kune kwakakosha sei kushandisa yakawanda